Shirkada DP World oo 15$ Malyan ayey Puntland ku wareejisay – PuntlandNews24
Shirkada DP World oo 15$ Malyan ayey Puntland ku wareejisay
Waxaa la soo gaarsiiyey Maamulka Puntland Lacag dhan 15 milyan oo dollar oo Dhaqaale hormarin ahaan looga soo qaaday shirkadda Imaraadka Carabta ee mashruuca dhismaha iyo ballaarinta dekadda Bossaaso dhawaan heshiiska lagula soo galay dalka Isu taga imaaraadka Carabta Shirkad lagu magacaabo DPWorld.
Dhaqaalahan gaaraya 15-ka milyan oo dollar ayaa gacanta loo geliyey madaxda sare Puntland. Lacagtan oo ay bixisay shirkadda DP world ee imaaraadla Carabta ayaa ah mid looga goleeyahay kabista dhaqaalaha hay’adaha dowladda Puntland
Lacagtan ayaan ku dhicin khasnada Bangiga Dowladda Puntland, waxaana si toos ah loogu shubay Acont gaar ah oo madaxtooyada Pumtland dibadda uga furan.
Lacagtan ayaa la hadal hayaa in sadex malyan oo ka mid ah la siinayo oo loo qeybinayo Garoonka diyaaradaha Garoowe, jidka Gaalkacyo iyo garoowe isku xira iyo wadada Eyl ee laamiga ah. Inta kale lacagta ayaa la sheegayaa in wa xooga laga siinayo aan badneyn Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland oo la doonayo in ay si duuduub ah ku ansixiyaan heshiisyada mad madowga badan uu ku jiro ee Madaxda Puntland la soo gashay shirkado shisheeye oo macaash doon ah.
Heshiiska Dhismaha Dekadda Bossaaso waxaa ka mid ah qodobo badan oo halis ku ah mustaqbalka deegaanka Puntland, waxaana ka mid ah qodob dhigaya in muddo sodon sanno ah aan wax dekad kale ah laga dhisi karin Xeebaha Gobolada Bari, Gardafuul, Sanaag iyo Nugaal.
Haddaba, ku tagrifalka dhaqaalaha magaca Puntland lagu soo qaado iyo dakhliga guud ee Puntland ka soo xarooda ayaa ah kuwo aan cid iskula xisaabtantaa jirin, waana maamul xumo baahsan oo musuq maasuqu uu hareeyey guud ahaan Maamulka Puntland.
Hantidhowrga guud iyo maxkamadda sare Puntland ayaa ah kuwo aan dareen badan oo lagu ilaalinayo lunsashada hantida ummadda wax xil weyn ah iska saarin, waana tallaabooyinka sahlaya in si gaar ah ugu tagrifalaan kooxda hadba awoodda xukunka marka jira haysa oo sidii la doono ay ka yeelaan, iyadoo wax cabsi ah ka qabin in lagula xisaabtamayo hantida ummadda wadagaan ee Puntland.
Masuul sare Bile Qabowsade
Madaxweynaha Puntland oo Lacag Ku Wareejiyey Labada Guddi ee Dhismaha Airport ka Garoowe iyo Wadada Ceeldaahir-Ceerigaabo.